Ungaziva Sei Mwana Anotyisa | Bezzia
Maria Jose Roldan | 10/09/2021 22:20 | Dzidzisai vana
Toxicity harisi dambudziko rinoitika chete muvakuru, sezvo pangavewo nehuturu vana. Mwana ane matambudziko ekuzvibata anogona kukonzera kukuvadza kwakakomba kumhuri yemhuri.
Kana vabereki vakacherekedza kuti mwana wavo mamwe maitiro ane chepfu, zvakakosha kuti uone nyanzvi nekukurumidza sezvazvinogona, kugadzirisa dambudziko rakadai rehunhu. Munyaya inotevera tinokuudza iwe hunhu hwakasarudzika hwevana vane huturu kana vadzvanyiriri uye zvekuita nezvavo.
1 Ungaziva Sei Mwana Anotyisa kana Anodzvinyirira
2 Sei kune vana vane chepfu
Ungaziva Sei Mwana Anotyisa kana Anodzvinyirira
Hazvina kuoma kuziva mwana ane chepfu sezvo achiwanzo kuita hasha kupfuura zvakajairwa uye havana kana kuremekedza vane masimba. Zvakajairika kuti pakatarisana nemamiriro ezvinhu aya, hukama hwevabereki nemhuri hunodzikira nekufamba kwemakore. Ipapo isu tinokuratidza mune yakadzama nzira, akanyanya hunhu maficha evana vane chepfu:
Hunhu hukuru kana hunhu kushora masimba uye kusvetuka mitemo inoiswa mukati memhuri. Vanoita zvavanoda zvisinei nezvinotaurwa nevamwe.
Ivo havawanzo kutora kwete semhinduro sezvo ivo vachifunga kuti vanokodzera zvese. Kana chimwe chinhu chikashata, vanoita zvechisimba uye nehasha huru.
Ava ndivo vana vane tsitsi shomanana uye havanzwi chinhu kana vachikonzera kurwadziwa kune vamwe vanhu. Mumamiriro ezvinhu emhuri, vanowanzo bata vabereki vavo nenzira inonyadzisa uye nenzira inoshoreka.
Maitiro evana vane chepfu anowanzo kuve nehasha uye achipomerwa nehasha. Ivo vanogona kugara vachirwisa vamwe vana nevabereki vavo chaivo.
Imwe yemaitiro akajairika muvana vane chepfu anowanzo shandiswa. Kana zvasvika pakutora chimwe chinhu chinogona kuvabatsira, ivo vanokwanisa kubata chero munhu.
Sei kune vana vane chepfu
Vabereki vazhinji vanonetseka kana huturu Icho chinhu chakazvarwa kumwana kana icho chiri mhedzisiro yedzidzo yakaipa. Zvinogona kuitika kuti hunhu husina kukodzera uhwu hunokonzerwa nedambudziko rekuberekwa kwepfungwa mumwana. Kune rimwe divi, zvinonzi huturu hunogona zvakare kuuya kubva kune imwe mhando yekuberekesa iyo yanga isina kukwana. Dzidzo inopihwa nevabereki inokanganisa hunhu hwemwana.
Kana mwana akarererwa munzvimbo ine chepfu, zvakajairika kuti nekufamba kwenguva, mudiki anowana hunhu hwehudzvanyiriri. Dzidzo inofanirwa kuve yakavakirwa pane dzakateedzana tsika dzinobatsira mwana kukura kuremekedza akateedzana emitemo nemabasa mukati memba.
Muchidimbu, basa revabereki rakakosha kana zvasvika pakudzivirira mwana wavo kubva mukukudziridza hunhu hune chepfu. Huchenjeri hwepamoyo hunofanirwa kutarisirwa kana uchidzidzisa nekuisa mavari nhevedzano yemaitiro akadai sekuremekedza kana kunzwira vamwe tsitsi. Dzidzo yakakosha panguva yehudiki kubvira muchikamu chino, vana vari kuumba nekuumba hunhu hwavo. Panyaya yekutarisa mamwe maitiro ane chepfu mumwana, zvakakosha kuti vabereki vatsvage rubatsiro rwehunyanzvi hwakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Vanamai » Dzidzisai vana » Ungaziva Sei Mwana Anotyisa
Sipanish inogadzikana uye vegan yekuchenesa zvigadzirwa